Bombardier CRJ-200 feno fonosana FSX & P3D HOT
Exclusive Rikoooo Bombardier CRJ-200 miaraka amin'ny modely 3D natokana ho an'ny FSX ary teratany ho an'ny Prepar3D v4.2 +
Miaraka amin'i Cockpit Virtual Reworked (kinova Beta) nataon'i David Hoeffgen.
Fahazoan-dàlana avy amin'i Mitsushi Yutaka no namadihan'i Rikoooo ny POSKY CRJ-200 avy amin'ny FS2004 ho lasa teratany vaovao FSX / P3D modely mampiasa programa "Model Converter X" sy "Blender". Ny modely dia ahitana ny fihetsiketsehana rehetra, ny vokatry ny voninkazo vaovao, "Emissive MultiplyBlend", "Global Environment Map as reflection" ary "manaparitaka diffuse by diffuse alpha". Rikoooo koa dia namorona tontolon'ny tarehintsy tsara tarehy sy ny alfa alpha vaovao ho an'ny fiasan'ny metaly, ny tontonana rehetra dia niova fo ho DXT5 format mba ahafahana mifanaraka tanteraka amin'ny FSX ary P3D manome tahiry haingana kokoa.
Virtual Cockpit (avy amin'i David Hoeffgen) beta version:
Ity dia fanavaozana ny kabine default Bombardier CRJ 700 ao amin'ny Microsoft Flight Simulator X.
Ampidirina ao anatin'ity entana ity miaraka amin'ny fahazoan-dàlana avy amin'i David Hoeffgen (Misaotra azy).
Ny singa fototra dia:
1. Ny safidin'ny FMC (Custom BMP ho an'ny Honeywell FMC nataon'i Rikoooo)
2. Ny endriky ny MFD sy EICAS azo ampiasaina ho an'ny kapiteny sy ny tompon'andraikitra voalohany
3. Ny voka-dratsin'ny rivotra amin'ny biriky sy ny fiasan'ny mpiasa
4. Fiarovana fiarovan-tena sy fiarovan-tena
6. GPWS nataon'i Rob Barendregt
7. Sary fanitsiana maro sy sary
8. Nampidirin'ny fanehoan-tsary sy fanasongadinana
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio ny manual of Virtual Cockpit.
Ny feon'ny CRJ-200:
Ity rakitra ity koa dia manolotra feo marina sy mahazatra ho an'ny CRJ-200 (CF34 Turbofan) nataon'i Christoffer Peterson. Rikoooo dia nanampy feo ihany koa momba ny "Tsy mifoka sigara" sy "Seatbelt".
GPWS (rafitra fampandrenesana akaiky) dia tafiditra amin'ity rafitra ity, anisan'izany ny elanelana sy ny "Approaching Minimums", "Terrain Terrain", "Sink rate" ets.
32 repoblika manerana izao tontolo izao:
Ity ny lisitry ny famerenana rehetra tafiditra ao anatin'ity fonosana ity: Air France, Air Littoral, Air Canada, Quebecair, UTair, Norveziana, America West Express izay tantanan'ny Mesa Airlines, Delta Connection Skywest, Lufthansa, Continental Express, JAL Pokemon, Delta Connection (Expressjet), Midwest Connect, Orbit Airlines, Air Service Gabon, Air Uganda, Air Volga, Ak Bars Aero, Air Nostrum, Armavia, Cimber Air, Congo Express, Boliviana Regional, Rusline, J-AIR, Skywest, Turkish Airlines, Orion Operations manokana, LynXexpress, United Express (Air Wisconsin), Monarch, Aereotuy.
Download tsy misy rindry automatique:
Raha tsy mila installer automatique ianao, dia rohy download amin'ny ZIP version izany
Nohavaozina taminy 28 / 05 / 2018: Misaotra an'i Simon Kelly (mpikambana ao amin'ny Rikoooo) amin'ny fanitsiana ny lanjany, ny fatran'ny solika sy ny maro hafa (fanovana ny rakitra fiaramanidina.cfg) sy ny fampidirana lisitra sy lisitra momba izany add-on.
Nohavaozina taminy 25 / 05 / 2018: Modelin'i 3D - Fanitsiana ny sainam-panilanana sy ny filalaovana an-tsokosoko izay diso. P3Dv4 - Fanitsiana ny laharan'ny sidina ao amin'ny Aircraft.cfg. Fanavaozana ny installer automatique.
23018 3.78 (32)
Avy amin'ny paompy Virtual dia avy amin'ny Premier Aircraft Design Q400 nohatsarain'i Rikoooo. Ny maodely ivelany dia avy amin'ny DreamWings Q400 taloha nohatsarain'i Rikoooo. Version 2.0 nataon'i Philippe Marion
23937 3.31 (32)
Nosoratan'i Richard Schwertfeger
Bombardier CRJ-200 feno fonosana FSX & P3D
36116 3.29 (51)
Nosoratan'i Rikoooo, Mitsushi Yutaka (Project OpenSky), David Hoeffgen (VC), Christoffer Peterson (Feo), nohatsarain'i Simon Kelly
53693 4.13 (38)
Nosoratan'i Massimo Taccoli, Dennis Seeley, dave Eckert, Michel Gerard, FSX ny fiovan'ny teny Bluebear
19883 4.40 (5)
Amin'ny alàlan'ny Modely avy amin'ny IRIS Simulation, nolokoana nataon'i S Petersen, Vaovao farany nataon'i Chris Evans
Downloads 36 116
Rikoooo, Mitsushi Yutaka (Tetikasa OpenSky), David Hoeffgen (VC), Christoffer Peterson (feo), namboarin'i Simon Kelly